Cathedral of St. John, Kon-Katidral ta 'San Ġwann - Valletta
Eoropa Malta Valletta
Adiresy: Triq San Gwann, Il-Belt Veleta, Malta
Phone: +356 2122 0536.
Tranonkala Ofisialy: www.cityofvalletta.org
Ny fahitana tsara an'i Valletta sariaka dia ny Katedraly St. John. Ny endriny dia mitovy amin'ny trano mimanda mahazatra mahazatra, saingy ao anatiny dia lapa mahafinaritra. Kapoaly, mozika tapaka, sary hoso-doko mahazatra eo amin'ny rindrina ary varavarankely fitaratra - tsy hay tombanana fotsiny izany.
Ny Katedraly St. John ao Valletta dia naorina ho fanomezam-boninahitra an'i Md John ilay Batista tamin'ny mpitaingin-tsoan'i Malta. Tamin'ny taona 1572 dia notendren'ny tompon'ny ambaratongam-pahefana Jean de la Cassiere ny fananganana an'ity mari-pamantarana ity ho an'ny mpanao mari-trano miaramila - Glorm Kassar. Tany am-boalohany dia fiangonana kely ilay katedral, saingy taorianan'ny fahirano lehibe tao Malta dia navaozina izany. Ny ankamaroan'ny fiovana dia natao tao amin'ny katedralina. Ampio trano anatiny tsara tarehy Baroque ny hevitra ofisialy italiana Mattia Preti, izay nandray anjara tamin'ny famolavolana azy.
Ny fahitana ny katedraly
Ny ivon'ny Katedraly St. John any Valletta dia sangan'asa ara-tantara. Raha miditra ao an-tsainao, dia atodiho avy hatrany ny tany - mozika iray izay manjary vato vato marbra avy amin'ny Ratsin'ny Order of Malta. Eto dia, teo ambanin'ny tany dia ny fandevenana ireo maherifo lehibe ao amin'ny firenena. Ny sary sokitra vato sy ny plastika manify dia holazaina aminao momba ny fiainan'i Jaona Mpanao Batisa. Ao amin'ny katedralina dia misy chapelle valo mahafinaritra natokana ho an'ireo mpiady valo amin'ny lamandy.
Ny fanajana lehibe an'ireo mpitsidika dia navoakan'ny sary nataon'i Michelangelo da Caravaggio, "Ny fanesorana an'i John the Baptist", 1608. Noforonin'ny artista mpikomy io sary io tao anatin'ny fotoana fohy, taorian'ny namonoana azy ho faty noho ny vono olona tamin'ny saka mpimamo. Ity sangan'asa ity no asa soratra noforonin'ilay mpamorona farany. Ao amin'ny katedralina, misy sary iray teo aloha, "Hieronymus III", dia nahita toerana ho an'ny tenany.
Eo akaikin'ny fidirana lehibe ao amin'ny Katedralin'i Md John dia misy tsangambato ho an'ny tompon'antoka malaza Marcantonio Dzondadari, izay zana-drahalahin'ny Papa lehibe Alexander VІІ.
Ny Katedraly St. John any Valletta dia mandalo ny Alatsinainy ka hatramin'ny zoma amin'ny 9.30 hatramin'ny 16.30. Ny Sabotsy dia misokatra ho an'ny mpitsidika hatramin'ny 12.00. Amin'ny alahady, ny mpikambana ao amin'ny fiangonana ihany no afaka mitsidika ny katedralina.
Hatramin'ny fisehoana sy ny fikojakojana ny fikarakarana ny vidin'ireo katedraly, tamin'ny taona 2000 dia nanapa-kevitra ny hanao fidirana ho an'ny mpitsidika vola. Amin'izao fotoana izao, afaka mividy tapakila amin'ireto sidina ireto ianao:
mpianatra - 4.60 euros;
olon-dehibe - 5.80 euros;
mpisotro ronono - 4.80 euros.
Ankizy latsaky ny 12 taona no afaka maimaim-poana.
Azonao atao ny manatratra ny Katedraly St. John ao Valletta amin'ny alalan'ny fitateram-bahoaka , ohatra, amin'ny fiara fitateram-bahoaka. Ny fiatoana akaiky indrindra amin'ny toerana mahaliana dia Main Bus Terminus.
Ny Museum Militaire State
Palasin'ny Grand Master
Mitafy fanjaitra ho an'ny menamena
Mary-Kate Olsen dia nizara ny mediam-panambadiana momba ny fanambadiana miaraka amin'i Olivier Sarkozy
Afaka bevohoka ve aho aorian'ny fanalan-jaza?
Boeing 777 200 - drafitra anatiny
UZDG fanaka amin'ny loha sy ny tendany
Mamboly amin'ny tananao manokana avy amin'ny fitaovana manaparitaka
Inona no azoko homanina ao amin'ny oven mikrofo?
Kitapo fofona ho an'ny lakaly
Toro-hevitra ho an'ny vola amin'ny ravina vony
Manao akanjo mariazy
Ny zanak'i Pamela Anderson dia tsy te hanangana karazam-panorenana!
Top 5 horonam-peo ratsy indrindra
Zaeda eo amin'ny zoron'ny vavany - antony
Osho Meditation isan'andro
I Sam Claflin sy i Laura Haddock dia tonga ray aman-dreny fanindroany